Minisitry ny Fitsarana : “ Fanalam-baraka ny Fitsarana Malagasy no nataon’i Houcine Arfa” - Triatra 22 janvier 2018 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Houcine ARFA Minisitry ny Fitsarana : “ Fanalam-baraka ny Fitsarana Malagasy no nataon’i Houcine...
Nitondra fanazavana mazava mikasika an’ilay gadra nandositra izay miezaka manely vaovao tsy marina ny minisiteran’ ny Fitsarana omaly, ambaran’ izy ireo fa « mitsipaka tanteraka ireo rehetra izay voalazan’ingahyArfa Houcine izay miendrika ho fanasoketana sy fanalam-baraka ny Fitsarana malagasy, ny Ministeran’ny Fitsarana ary ireo andrim -panjakana malagasy iray manontolo. Misy tokoa ireo olona izay manana tombontsoa hanaparitahana vaovao tsy marina sy hamafy lainga tahaka itony entina hanakorontanana ny saim-bahoaka, ka izay indrindra no nahatonga ny minisitera manao izao fanambarana izao. Efa nisy ny fanadihadihana natao sy fepetra noraisina nandritra izay fotoana tsy nitenenana izay ». Manoloana ny fihetsika izay tsy nanaovan’ny mpanao gazety vahiny fanadihadiana, na ihany koa fanontaniana ny voakasika amin’ny fanasoketana dia mazava ny nambaran’ny ministeran’ ny Fitsarana fa « tsy nieritreritra ny hamotopototra akory ireo haino aman-jery ireo àry tsy mba niezaka nijery raha marim-pototra tokoa ny voalazan’ity gadra nitsoaka ity. Azon’izy ireo tokoa ny nanantona ny minisitra izay voatonona manokana tamin’ity raharaha ity kanefa tsy nataon’izany, fihetsika izay heverina fa tsy matihanina ». Noho izany dia mbola manamafy hatrany ny ministeran’ny Fitsarana fa olona meloka izay efa misazy ity Houcine Arfa ity. « Tsiahivina hatrany fa olo-meloka ingahy Arfa Houcine, ary nahavita heloka teto amin’ny firenena malagasy alohan’izao fitsoahany any ivelany izao. Mbola maro ireo raharaha hafa mahavoarohivohy an’ingahy Arfa Houcine toa ny fikambanan-jiolahy sy ny fitazomana fitaovam-piadiana maro izay tsy misy alalana, ary isan’ny heloka nataony farany izao fitsoahana ny fonja izao » hoy hatrany ny fanazavana azo avy amin’ ny minisiteran’ ny Fitsarana.
Manoloana ny fandraisana fepetra amin’ny famindrana ity gadra nandositra ity teny amin’ ny fonja Antanimora dia mazava ihany koa ny fanazavana izay nentin’ny minisiteran’ ny Fitsarana « Natao ny famindrana an’ingahy Arfa Houcine avy any Tsiafahy ho any Antanimora noho ny antony ara-pahasalamana satria lasa narefo tokoa ny toe-pahasalamany taorinan’ireo fikasany hamono tena. Firenena manaja ny zon’olom belona ny firenena Malagasy, ary manan-jo hotsaboina ingahy Arfa Houcine. Tokana ihany ny fahazoan-dalana hamonjy hopitalim-panjakana nomen’ny minisitry ny Fitsarana, fahazoan-dalana tamin’ny 14 desambra 2017 kanefa nanjary nampiasaina lava sy nohararaotina izany, ka niafara tamin’ny fitsoahana ny 28 desambra 2017». Taorian’ ny faharenesan’ ny minisitry ny Fitsarana fa nitsoaka kosa ity gadra ity, dia nisy avy hatrany ny fandraisana andraikitra tamin’ ny famoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena. Ankoatra izay dia efa misy ny fiaraha- miasa amin’ ny firenena frantsay izay efa mandeha araka ny tokony ho izy amin’ izao fotoana izao. Ireo rehetra izay niray tsikombakomba tamin’i Houcine Arfa ihany koa dia efa nanaovana fanadihadiana ,ary araka ny tatitra dia efa nahitam-bokany izany.
Noho izany dia tsy mipetraka fotsiny ny minisiteran’ ny Fitsarana manoloana izao raharaha izao, ary manamafy izy ireo fa mitohy hatrany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. «Mitohy hatrany ireo fanadihadiana efa natomboka entina maneho ny marina rehetra momba ity raharaha ity. Tsy afaka ny hitazam-potsiny ihany koa anefa ny minisitera taorian’ireny fanasoketana sy fanaratsiana olona sy andrim-panjakana ireny ka hametraka fitoriana eny anivon’ireo Fitsarana mahefa amin’izany». Noho ireo rehetra ireo dia manao antso avo amin’ireo mpiara-miasa ao amin’ny fitsarana ny minisitera. «Eto dia manao antso amin’ireo mpiara-miasa rehetra eto amin’ny minisiteran’ny Fitsarana mba hampiseho hatrany fahaiza-mandinika sy mandalina manoloana izao raharaha izao. Tsy tokony hampiseho fiandaniana , ary tokony ho saro-piaro hatrany amin’ny fiandrianan’ny Fitsarana». Ankoatra izay ihany koa dia eo ny fanambaran’ny minisiteran’ ny Fitsarana amin’ny fanamafisana hatrany ny tany tan-dalàna «Miezaka hatrany ny minisiteran’ny Fitsarana hanamafy ny maha tany tan-dalàna ny firenena, ny hametraka fitsarana mendrika sy atokisan’ny vahoaka».
Article précédentAffaire Houcine Arfa Elise A Rasolo porte plainte – Newsmada du 22 janvier 2018
Article suivantSyndicat des magistrats de Madagascar la ministre de la justice devrait démissionner la gazette de la grande île du 22 janvier 2018